IZIZATHU EZILI-10 ZEXESHA LAKHO LIKHANYA-OONOBANGELA BEHYPOMENORRHEA - IMPILO YEZESONDO
Izizathu ezili-10 zeXesha lakho liKhanya kunesiqhelo, ngokweGqirha
Eyona / Impilo Yezesondo
Eli nqaku lahlaziywa kwezonyango ngu-Angela Chaudhari, MD, ilungu leBhodi yoPhononongo lwezoNyango.
Xa uninzi lwethu lukhalaza malunga nezethu amaxesha , thina kvetch malunga nezo ntsuku zokuhamba zinzima kunye ukudumba , cramping, kunye nokudinwa okunokuhamba kunye nabo. Ke ukuba unexesha lokukhanya, aka hypomenorrhea, inokubonakala ngathi yinto elungileyo. Ngelixa ukopha kancinci kunokwenza ukuba ukhululeke ngakumbi, inokuba luphawu lokuba kukho into engahambanga kakuhle. (An ixesha elinzima ngokungaqhelekanga inokuba sisizathu sokukhathazeka.)
Ngelixa uninzi lwamaxesha luvelisa phakathi kweemililitha ezingama-30 ukuya kwezingama-50 zegazi, umntu onehypomenorrhea wenza kakhulu ngaphantsi kweemililitha ezingama-30 kumjikelo ngamnye, ngokutsho kwencwadi Iindlela zeKlinikhi: Imbali, iiMviwo zoMzimba kunye neLebhu . Kunzima kakhulu ukulinganisa ixesha lakho ngeemililitha, kodwa le yinqaku ekubhekiswa kulo.
yintoni imizuzu yemizuzu kwi-fitbit
ULina Akopians, MD, Ph.D. , ingcali kwi-endocrinology yokuzala kwiZiko lokuZala lase-California, uthi ixesha elikhanyisa kakhulu linokubangelwa yimeko yehomoni okanye eyakhiweyo (okuthetha ukuba kwenzeka into kwilungu emzimbeni wakho). Oko kwathethi, Nazi izizathu eziphambili ezinokuthi zichaze ukuba kutheni ukuhamba kwakho kukhanya kakhulu.
1. Kungaba luphawu lokukhulelwa.
Ngelixa kucacile iimpawu zokukhulelwa ngu ndilahlekile Kuyavela ukuba abanye abantu basetyhini bayaqhubeka ukopha okanye ukukhanya kwexesha labo xa bekhulelwe, utshilo u-Janet Choi, MD, ingcali kwezonyango e CCRM eNew York . Ngapha koko, unezigulana ebezisokola ukukhulelwa ziphume ziye kusela emva kokuba ukukhanya kwexesha labo kubonisiwe-kodwa kamva bafunda ukuba ngenene bakhulelwe.
Ukukhanya okungaqhelekanga okanye ukubonwa kunokubonisa ukukhulelwa kwe-ectopic (xa ukufakelwa kweqanda kwenye indawo ngaphandle kwesibeleko), kunokuba yingozi kakhulu. Xa ungathandabuzeki, thatha uvavanyo lokukhulelwa.
wenza njani ezimpundu okokuqala
2. Ulahlekile okanye uzuze itoni yobunzima.
Ubunzima obuguquguqukayo bunokungqubana nomjikelo wakho wokuya esikhathini, okwenza amaxesha akho abe mfutshane kakhulu okanye abe lula. Kungenxa yokuba xa tyeba , Ukugcina amafutha amaninzi emzimbeni wakho kunokuchaphazela amanqanaba akho e-hormone kwaye ubalahle ngaphandle kokulinganisela. Ngendlela efanayo, ukunciphisa umzimba ekuthinteleni iikhalori kunokubeka umzimba wakho kwimo yoxinzelelo kunye nokudala ukungalingani kwamahomoni. Ugqirha Akopians uphawula ukuba umzimba wakho ufuna ibhalansi esempilweni phakathi protein , iiCarbohydrate, amafutha, kunye neevithamini, ukuze ziqhubeke nokusebenza ngokuqhelekileyo.
3. Uxinzelelo luphazamisa umzimba wakho.
Sele uyazi lonto Uxinzelelo lunokuphazamisa umzimba wakho ngeendlela ezininzi. Ngelixa ukucaphuka kwemihla ngemihla kungonelanga ukuba ulahle iihormone zakho, uGqirha Choi uthi ezona zinto zibangela uxinzelelo kubomi-umzekelo, ukukhathazeka ngenxa yelahleko okanye ukubandezeleka ukudakumba -Inokwenza kanye loo nto. Ukwabonisa ukuba ukusebenzisa umzimba ngokugqithileyo kunokonakalisa ixesha lakho ngenxa yoxinzelelo olubeka emzimbeni wakho.
4. Unedlala lengqula eligqithisileyo.
An idlala lengqula eligqithisileyo -Kwabizwa ngokuba yihyperthyroidism- iqala ukuvelisa iihormone ezininzi kakhulu, ezinokubangela imiba ebaluleke kakhulu entliziyweni yakho, ifuthe legazi , izihlunu, kunye nokunye. Amaxesha okukhanya ngokungaqhelekanga kunye namaxesha alahlekileyo ikwayimpawu yehyperthyroidism. Ukuba ufumana ezinye zeempawu zedlala engasebenziyo, yenza idinga ukubona ugqirha wakho.
5. Usebenzisa ulawulo lokuzalwa kwehomoni.
Esinye sezizathu eziqhelekileyo zexesha elilula liyaqhubeka ulawulo lokuzalwa kwehomoni ; Abanye oogqirha bade bayixele kwabasetyhini abanamaxesha anzima kakhulu ngenxa yeso sizathu. Ke ukuba usandula ukuqala ipilisi, usebenzisa isiziba okanye umsesane, okanye ndifumene i-hormonal IUD , kwaye amaxesha akho akhanyisile, kuqhelekile ukuba nemijikelezo ekhanyayo, ukutsiba ngokupheleleyo imijikelezo, okanye ube nexabiso elincinci legazi elimnyama okanye elikhanyayo.
6. Isenokuba ngenxa ye-polycystic ovary syndrome (i-PCOS).
I-PCOS yimeko apho ii-ovari zivelisa inani elikhulu ngokungaqhelekanga, kunye neehomoni zesini esingamadoda. Abanye abantu basetyhini abane-PCOS baya kuba neesaka ezincinci ezizaliswe ngamanzi, okanye ii-cysts, kwifom yama-ovari. Olu tshintsho lwehomoni lunokuthintela owasetyhini ekukhutshweni ngesiqhelo, oko kunokukhokelela kwiimpawu ezingathandekiyo, kubandakanya induna okanye ulusu olunamafutha , ukutyeba, kunye iinwele zomzimba ezigqithileyo . Okunye Iimpawu zePCOS Ngamaxesha angaqhelekanga kunye nalahlekileyo. Xa abafazi befumana ixesha labo, kunokuba nzima okanye kube lula kunomyinge. Thetha nogqirha wakho ukuba ufumana ezi mpawu.
7. Ufumana iimpawu zokuqala zokuyeka ukuya exesheni.
Xa isigulana sikhankanya ukubuyela okunciphayo kutyalo-mali lweetampon, into yokuqala uGqirha Choi ayijongayo bubudala. Ukuyeka ukuya exesheni inokuba ikhona ngekona, kodwa hayi rhoqo. Ngamanye amaxesha ngokuguga imijikelo iyatshintsha, utshilo, eqaphela ukuba ayisiyongxaki yokungachumi. Umntu ofuna ukusebenzisa i-super pad kwii-20s zabo nakwii-30s zokuqala banokufumana ukuba bafuna ukhuselo oluncinci kwii-30s zabo kamva.
8. Unesifo somlomo wesibeleko.
Ingxaki enqabileyo kodwa engathandekiyo, uGqr Akopians uthi oku kuyenzeka xa umlomo wesibeleko uncipha okanye uvala ngokupheleleyo. Oku kunokwenzeka emva kotyando lwangaphambili lomlomo wesibeleko okanye isibeleko, njengenkqubo ye-LEEP yephepha elingaqhelekanga okanye ukupheliswa kwe-endometrium ye-mens enzima. I-stenosis yomlomo wesibeleko inokuba ngenxa yamanqanaba asezantsi e-estrogen ngexesha ixesha lokuphumla . Ngenxa yoko, igazi lihlala livalwe esibelekweni okanye likwazi ukuphuma ngokuthe chu. Ukuba ufumene i-cramping embi, ngaphandle kokuhamba kokukhanya, thetha nogqirha wakho.
9. Izicwili ezibomvu kwisibeleko sakho zibangela imiba.
Uninzi lwabasetyhini abaye bahamba ngenkqubo ye-dilation kunye ne-curettage (D & C) yeenkqubo zokunyanga bayaphiliswa nge-zero iingxaki, kodwa ngamanye amaxesha ukonakala kakhulu kubangela ukuba iindonga zesibeleko zinamathelane, zibangele oko kwaziwa njenge-Asherman's syndrome. Ukuba ixesha lakho libonakala likhanyisile emva kokuba une-D & C, oku kunokuba yingxaki yakho. Ungadinga utyando ukususa izicwili ezibomvu.
10. Ulahlekelwe yitoni yegazi ngexesha okanye emva kokubeleka.
Le yimeko enqabileyo, utshilo uGqirha Akopians. Ukuphulukana negazi elininzi kuhlutha umzimba wakho ioksijini, enokuphelisa ukonakala kwendlala kwaye kubangele into ebizwa ngokuba yiSheehan's syndrome. Oko, ekunciphiseni kakhulu ukuveliswa kwamadlala kuzo zonke iintlobo zehomoni, kubandakanya nezo zilawula umjikelo wakho wokuya exesheni. Imveliso yehomoni ayichaphazeli kuphela ukuba sexesheni, kodwa inokuchaphazela amanye amalungu omzimba wakho, njenge-thyroid yakho. Ke ukuba ugqirha wakho ukhathazekile malunga noku, baya kuthi bakuthumele kwi-endocrinologist yokufumanisa isifo kunye nonyango.
Eyona nto ibalulekileyo: Ngelixa ixesha elilula kuneliqhelekileyo ayisosizathu sokwenza ialam, sukulutyeshela utshintsho. Landa umkhondo womjikelo wakho kangangeenyanga ezimbalwa, kwaye ukuba awubuyeli kwinto yesiqhelo, yenza idinga nogqirha wabasetyhini.
Inkxaso evela kubafundi abanjengawe iyasinceda ukuba senze owona msebenzi wethu mhle. Yiya Apha ukuba urhumele Uthintelo kwaye ufumane izipho ezili-12 ZASIMAHLA. Bhalisela iincwadana zethu SIMAHLA Apha yempilo yemihla ngemihla, isondlo, kunye neengcebiso zomzimba.
wenze igumbi lokulala licofe
elona xesha lilungileyo elangeni lesikhumba elinovakalelo
Olona hlobo lokuzilolonga ukuze ulahlekelwe ngamanqatha esisu
isisu esivuthayo somthambo ekhaya